Iprofayile yeNkampani-Shenzhen HONGSBELT
I-Shenzhen HONGSBELT, ishishini elikwinqanaba eliphezulu lobuchwephesha likarhulumente, ligxile kubuchwephesha benkqubo yokuhambisa imodyuli kwaye lizinikele kwizixhobo zokuvelisa ezikrelekrele zedijithali. Inenkqubo yokuhambisa ngobukrelekrele isiseko sokwenziwa kwemizi-mveliso, kwaye ikomkhulu layo liseLilang Innovative Software Park, kwiSithili saseLonggang, eShenzhen. Iimveliso eziphambili zale nkampani ziquka ibhanti lokuhambisa elinobukrelekrele, inkqubo yemodyuli ekrelekrele yokuhlela ngokukhawuleza, inkqubo yokuhambisa umsebenzi onzima wemoto, ukupakisha irobhothi inkqubo yokuhambisa ngokuzenzekelayo kunye neworkshop engabhalwanga inkqubo yokuhambisa ezenzekelayo.
I-HONGSBELT yasekwa ngo-2005, inabasebenzi abangaphezu kwama-200 kunye namalungelo omenzi wesizwe angaphezu kwe-100 kunye neziqinisekiso kude kube ngoku, yenza ikhonkco lexabiso leshishini elipheleleyo kunye nobuchwepheshe obuzimeleyo obungundoqo, amacandelo angundoqo, iimveliso eziphambili kunye nezisombululo zenkqubo yoshishino. Ukongeza, isicwangciso soshishino siyakhuthazwa ukuba sibe yinkqubo yokuvelisa ngobukrelekrele egubungela inkqubo epheleleyo yokuvelisa idijithali, inkqubo yokuchonga, itekhnoloji yokulandela umkhondo, njl.
Ukujongana nekamva, i-HONGSBELT ithatha i-industry 4.0 kunye ne "Made in China 2025" njengethuba, iyaqhubeka nokuphucula ukulungiswa kwezoshishino, ukulungelelanisa isakhiwo sombutho, ukomeleza amandla okuvelisa izinto ezintsha, kunye nokuphucula ngokubanzi amandla adibeneyo enkampani kwintsimi yokuvelisa i-intelligent, ngaloo ndlela. ukubonelela ngamandla okuqhuba anamandla kuphuhliso olujolise kwiqela lenkampani yethu. Ukudibanisa ubuchule obutsha, inkunzi netalente kwinto enye, ishishini ligcina uphuhliso oluzinzileyo.
I-HONGSBELT iya kugcina umoya wokuqamba izinto ezintsha, isebenzele abathengi bethu ngeyona mveliso intsha ikumgangatho ophezulu ukuhambisa ishishini laseTshayina elihambisa ngobukrelekrele phambili. U-HONGSBELT uzimisele ukusebenza kunye nawo onke amacandelo oluntu ukuze afezekise amaphupha amatsha rhoqo egcwele isayensi kunye nomdlandla wobugcisa bokukhonza ilizwe.